Madaxa dowlada Liibiya Fayez al-Sarraj ayaa sheegay inuu ka degayo kursigiisa dhamaadka bisha… – Hagaag.com
Madaxa dowlada Liibiya Fayez al-Sarraj ayaa sheegay inuu ka degayo kursigiisa dhamaadka bisha…
Posted on 17 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxa Golaha Madaxtooyada ee Dowladda Liibiya ee Heshiiska Qaranka, Fayez al-Sarraj, ayaa ku dhawaaqay inuu xukunka ku wareejinayo dowlad la isku raacay toddobaadyo gudahood, ka dib markii horumar laga gaaray wadahadalkii u dhexeeyay dhinacyada Liibiya, halka sarkaal Turki ah uu shaaca ka qaaday inuu dhowyahay heshiis lala gaaro Ruushka ee xabad joojinta Liibiya.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ku sheegay wareysi uu la yeeshay telefishanka CNN TÜRK Haber Arbacadii, in saraakiil ka socota Turkiga iyo Ruushka ay ku dhow yihiin heshiis xabad joojin iyo geedi socodka siyaasadeed ee Liibiya kulamadii ugu dambeeyay ee ay ku yeesheen Ankara.
Subaxnimadii Arbacada, Al-Sarraj wuxuu ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu ku wareejiyo waajibaadkiisa hey’adda fulinta ee xigta bisha soo socota, ka dib markii Guddiga Wadahadalka Liibiya uu dhammeeyay shaqadooda.
“Waxaan ugu bishaareynayaa qof walba rabitaankeyga daacadnimada ah inaan wareejiyo waajibaadkeyga dhamaadka bisha Oktoobar,” ayuu yiri al-Sarraj – khudbad lagu baahiyay kanaalka rasmiga ah ee Libya.
Wuxuu intaas ku daray in dowladda dib-u-heshiisiinta, tan iyo markii la dhisay, aysan ku shaqeyneyn deegaan dabiici ah, laakiin ay maalin walba la kulantay dhagar iyo mu’aamaraad ka kala imanayay gudaha iyo dibadda, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Wuxuu ugu yeeray Guddiga Wadahadalka in ay qaataan doorkooda sameynta hey’adda fulinta si loo hubiyo in si nabad ah xukunka loogu kala wareego.
Hadalka Al-Sarraj wuxuu yimid ka dib wadahadal maalmo ka hor ka dhacay Bouznika, Morocco, oo u dhaxeeyay laba wafdi oo ka socda Golaha Sare ee dowlada iyo Golaha Wakiilada oo deggen Tobruk (bariga Liibiya) oo Horumar laga gaaray heshiiska dib loogu dhisayo Golaha Madaxtooyada.
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa ku dhawaaqay Arbacadii inuu damacsan yahay inuu bilaabo wadatashiyo deg deg ah oo uu ku magacaabayo ergey cusub ee Liibiya.
“Waxaan haynaa calaamado rajo ah, Wakiilkayaga Gaarka ah (Stephanie Williams) waxay si adag uga shaqeynaysaa qabashada wareega xiga ee wadahadalada Liibiya,” ayuu Guterres ku yiri shir jaraa’id oo uu qabtay munaasabadda furitaanka kalfadhiga 75-aad ee Golaha Guud, oo bilaabmay Talaadadii.
Isaga oo ka hadlaya ergayga cusub, Guterres wuxuu intaas ku daray, “Waxaan bilaabi doonnaa wadatashiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si aan ugu magacawno ergay cusub dalka Liibiya.”
Talaadadii, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu meelmariyay qaraar lagu kordhiyay waqtiga Howlgalka Taageerada Qaramada Midoobay ee Libya (UNSMIL), muddo hal sano ah, illaa iyo Sebtember 15, 2021.
Qaraarka waxaa ku xusan “in howlgalka uu hogaamin doono ergey gaar ah oo xoghayaha guud wakiil ka ah, iyo in uu jiri doono isku duwaha howlgalka kaasoo mas’uul ka ah howl maalmeedka iyo maaraynta.”
Tan iyo markii uu iscasilay ergayga Qaramada Midoobay ee Libya, Ghassan Salameh, horaantii bishii Maarso, booska ayaa banaanaa ilaa maanta. 11-kii Maarso, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu u magacaabay Stephanie Williams inay noqoto Ku-simaha Wakiilka Gaarka ah iyo Madaxa Ergada Qaramada Midoobay ee Liibiya, illaa beddelka Salameh laga magacaabayo.